China Mekanika fanidiana famehezana ary mpanamboatra | Tianzheng
Ny tombo-kase mekanika dia misy EPDM na fantsom-baravarankely malefaka sy tadim-borona epDM miaraka amina fantsom-by vy manokana sy ny lela mikikitra mba hanomezana ny fihazonana tsara kokoa, izay ampiasaina amin'ny milina, fiara fitaterana, kamio ary ny sisa. dia ampiasaina hanomezana tombo-kase amin'ny fotoana idirana na fivoahan'ny zana-kazo mihodina. Mandritra ny fandidiana ara-dalàna dia misy sarimihetsika mihetsika manify eo anelanelan'ny tarehy mihodina sy mijanona, ny asany dia ilaina amin'ny fanosorana ireo tarehy famehezana ary amin'izany hisorohana ny fitafiana be loatra. Ny tombo-kase mekanika dia manana toetra mekanika tsara, manana habe maro izy mba hifanaraka tsara sy tsara tombo-kase tombo-kase .mekanika dia afaka mampihena ny tabataba sy ny hatairana ary koa miaro ny sisin'ny mekanika amin'ny fahasimbana sy ny maripana marobe. Afaka mamokatra vokatra vaovao izay manome fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny fotoana fohy indrindra araka ny takian'ny mpanjifa isika.
Fitaovana: EPDM, PVC malefaka
Halavan'ny mari-pana ankapobeny: PVC: -20˚F ka hatramin'ny 150˚F EPDM: -40˚F ka hatramin'ny 230˚F
Fitaovana clip: Aluminium, vy
Hamaf: PVC: 85 morontsiraka A EPDM: 70 morontsiraka A
Fonosana: baoritra sy baoritra naondrana matanjaka na aondrin'ny mpanjifa' fepetra takiana
Fanoherana: fanoherana ny toetr'andro - Tsara be
fanoherana alkaly sy asidra - Mahafinaritra
Fanoherana ny fahanterana sy ny ozon- - Tena tsara
Fanoherana ny fahantatry ny masoandro - Tena tsara
Taratasy fanamarihana: nahazo ISO91001 sy IATF16949 izahay
Ny tombo-kase mekanika dia karazana fonosana napetraka ao amin'ny vatan-kazo mampita ny milina mihodina. Ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany izy ireo, manomboka amin'ny fiara, sambo, balafomanga ary fitaovana fampitaovana indostrialy, hatrany amin'ny fitaovana fonenana. Ny tombo-kase mekanika dia natao hisorohana ny tsiranoka (rano na solika) ampiasain'ny milina tsy hivoaka amin'ny tontolo ivelany (ny rivotra iainana na a rano misy rano). Ity anjara asan'ny tombo-kase mekanika ity dia mandray anjara amin'ny fisorohana ny fahalotoan'ny tontolo iainana, ny fitsitsiana angovo amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny milina ary ny fiarovana ny milina.
Teo aloha: Tady hametahana pirinty amin'ny tenanao
Manaraka: Tombo-kase varavarana kabinetra
Kofehy famehezana mekanika